Maraykanka oo horjoogsaday Qaraar ka dhan ahaa Xasuuqa Israel ka wado Gaza • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Maraykanka oo horjoogsaday Qaraar ka dhan ahaa Xasuuqa Israel ka wado Gaza
Maraykanka oo horjoogsaday Qaraar ka dhan ahaa Xasuuqa Israel ka wado Gaza
May 15, 2018 - By: Khalid Yusuf
Dowlada Maraykanka ayaa horjoogsatay qaraar ay soo diyaarisay dowlada Kuwait oo xubin ka ah golaha Amaanka oo lagu doonayey in lagu cambaareeyo xasuuqa Israel ka geysatay Gaza.
Xili ay isa soo tareyso cambaareynta xasuuqa ciidamada Yahuuda la beegsadeen mudaharaadyaasha reer Falastiin ee ku sugan Marinka Gaza, ayaa la filayaa in golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay arritan uu maanta kulan deg deg ah ka yeesho.
Xalay ayey dowlada Kuwait Golaha Amaanka u gudbisay qoraal horudhac ah oo ay soo diyaarisay, kaasi oo loogu baaqayey in Golaha uu qaraar kasoo saaro xasuuqa shalay ka dhacay Gaza, iyadoo qoraalkaasi lagu xusay in baaritaan caalami ah lagu sameeyo dilalka ay geysteen ciidamada Israel.
Dowlada Maraykanka oo kamid ah xubnaha joogtada ah ee golaha amaanka ee awooda VETO kuleh ayaa si deg degleh ku qaadacay qaraarkan, waxaana la filayaa in kulanka maanta Golahaasi yeelan doono si lamid ah ugu difaaci doonto xukuumada Israel.
Maraykanka ayaa shalay magaalada Barakeysan ee Qudus ka furtay Safaaradooda oo laga soo raray magaalada Tel Aviv, go’ aankaasi oo uu bishii December horey usii shaaciyey Madaxweynaha dalkaasi ee Donald Trump.